20/01/2016 – Gentleman Magazine
ချစ်ဇာတ်လမ်းတိုင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့် ၁၄ ခု
ခဈြဇာတျလမျးတိုငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး အခိုကျအတနျ့ ၁၄ ခု ၁. နှစ်ယောက်ထဲ ပထမဆုံး ထွက်လည်ဖူးတဲ့နေ့၊ လက်ထပ်တဲ့ နေ့လောက်ကို စိတ်လှုပ်ရှားရပြီး နောင် ပြန်အမှတ်ရစရာ တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ ၂. ပထမဆုံးအကြိမ် မနမ်းခင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်နေကြတဲ့ တခဏလေး၊ ပထမ အနမ်းဟာ
ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ဖြည့်တင်းဖို့ နည်းလမ်း ၈ မျိုး
ကိုယျ့ဘာသာ စိတျဓာတျခှနျအား ဖွညျ့တငျးဖို့ နညျးလမျး ၈ မြိုး လူတိုင်းဟာ စိတ်အင်အား ပြည့်ဝချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ သောကြာနေ့ နေ့ခင်းဖက်တွေမှာဆို ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ထဲ စိတ်မဝင်စားတတ်ကြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမြဲ အဲဒိလို ဖြစ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ စိတ်ခွန်အားနိုးကြားဖို့မှာ အပေးအယူ ရှိပါတယ်။ သင် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးမှ
ဦးနှောကျကိုထိခိုကျစနေိုငျသညျ့အလအေ့ကငျြ့ (၁၀)ခု သင် ခဏခဏမေ့တတ်နေပြီလား၊ အရင်တုန်းကလို မြန်မြန်ဆန်ဆန်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးလား။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်စွမ်းရည်တွေ ကျဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးကအရေးကြီးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တတ်ကြပေမယ့် ရေရှည်မှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့ ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ဂရုစိုက်မှုနည်းကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဉ်ဘ၀မှာ မသိလိုက်မသိဘာသာနဲ့ ဦးနှောက်ကို